Kupfeka Zvipfeko Kunonyatso Kukonzera Kurasikirwa Kwebvudzi? | Natural Bvudzi Regrowth & Bvudzi Kurasikirwa Kurasikirwa
Ngano kana Chokwadi? Vamwe vanoti chakanyanya kuita mhanza. Asi muchokwadi kupfeka cap yako yaunofarira, kunyangwe zuva nezuva hachisi chikonzero chikuru chaungave uchirasikirwa nebvudzi. Sekureva kwavanachiremba nenyanzvi dzebvudzi, ruzhinji rwevanhu vari kurasikirwa nevhudzi rakasungirirwa zvakananga kune mahomoni mumuviri inonzi DHT inorwisa bvudzi
Ngano kana Chokwadi?
Vamwe vanoti chakanyanya kuita mhanza. Asi muchokwadi kupfeka cap yako yaunofarira, kunyangwe zuva nezuva hachisi chikonzero chikuru chaungave uchirasikirwa nebvudzi.
Sekureva kwevanachiremba nenyanzvi dzebvudzi, ruzhinji rwevanhu vari kurasikirwa nevhudzi rakasungirirwa zvakananga kune mahormoni mumuviri unonzi DHT iyo inorwisa mavara ebvudzi mune ganda. Iyi inonzi androgenetic alopecia (kurasikirwa kwebvudzi kunokonzerwa nemhando yemhando) uye inobata kusvika makumi matatu kusvika makumi mashanu muzana evanhu pazera remakumi mashanu.
Nekudaro izvi hazvireve kuti hapana zvimwe zvinhu zvinopa kutetepa kwebvudzi nemhanza. Zvizhinji zvezvinhu zvakadai sekushanduka kwehomoni, mamiriro ekurapa, mishonga, kushushikana, maitiro emvere uye kurapwa zvese zvinogona kuita basa rekukuvadza bvudzi rako.
Zvino dzokera kumubvunzo: Hanzi dzinokonzera kurasikirwa kwebvudzi here?
Mhinduro yakatwasuka uye pfupi ndeyekuti kwete. Asi kupfeka heti kunyanya yakasimba mumusoro mako kwenguva yakareba kunogona kudzivirira kuyerera kweropa kusvika pachivara uye nekukonzera kukura kwevhudzi nekuonda kwebvudzi. MuTCM (Traditional Chinese Medicine) bvudzi rinoonekwa sekuwedzera kweropa uye kuyerera kweropa nguva dzose kune scalp kwakakosha kune hutano hwebvudzi kukura.
Dambudziko rimwe chete rinogona kuunzwa nehembe ndeyekuunganidzira ziya mu scalp iyo inogona kuwedzera sebum, dandruff uye pamwe kubvumira mabhakitiriya kukura zviri nyore izvo zvinogona kukonzera kusagadzikana kwebvudzi kukura. Ichi chikonzero nei zvakakosha kuti usapfeka ngowani zuva rose, zuva rega rega uye bvumira musoro wako kufema mune imwe mwenje yezuva iyo inoratidzwa kubatsira nekukura kwebvudzi.
Kugoneka kweTraction Alopecia
Chimwe chinhu chakakosha kana uchipfeka ngowani ndeyekuti inogona kupora traction alopecia, ndiko kurasikirwa kwebvudzi kunokonzerwa nekungogara kudhonzwa kwebvudzi. Semuenzaniso mimwe masitaera ebvudzi anosanganisira bvudzi bhendi mumabhero uye ponytails anokonzera kudzvinyirira kwakanyanya uye iri simba rinogona kukonzeresa kupora kwebvudzi kurongeka. Kana iwe ukazviwana iwe uchiramba uchidhonza vhudzi rako neheti yako inogona kunge ichikuvadza uye ichikanganisa kukura kwako kwebvudzi.
Zvakanakira Zuva reBvudzi rako
Chiedza chezuva chinobvumira muviri wako kubereka vhitamini D izvo zvinobatsira mukukura kwehutano hwebvudzi uye zvakare zvinodzivirira kurasikirwa nebvudzi. Vamwe dermatologists vanofunga kuti Vitamin D ndiyo yekurapa yakawanda yematambudziko ehutano hwomuviri. Nekudaro chenjera nekuti kuwanda kwezuva kunogona kuratidza ganda rako, kukonzera kupisa kwezuva uye kukuvadza mavara ebvudzi.
Hati dzinogona kusazove chikonzero chikuru chekuti urikurasikirwa nevhudzi, asi chinhu chimwe ndechechokwadi kuti havazobatsire kunyanya kana iwe uchivapfekedza kakawanda uye uchinyanyisa kutsvaira. Kana iwe uri munhu anofarira kupfeka ngowani dzemhando, kuvharisa zuva nezuva kana nekuti iwe uchida kuvanza kurasikirwa kwako kwebvudzi, funga kubvisa hat nguva imwe neawa kana zvakadaro kwemaminitsi gumi kana gumi neshanu kungotendera ganda rako kuti rifeme uye pakaoma. Sezvo kupfeka ngowani kunogona kudzvinyirira kubuda kweropa, chinhu chikuru chekuita ndiko kukwiza ganda rako kusimudzira kukura kwevhudzi zuva rega rega.
hanzi dzinokonzeresa bvudzi here?bvudzi rinoperahetihanzi dzinokonzeresa bvudzingano kana chokwadi nezvekurasa bvudzi